डा अरुणा उप्रेतीलाई प्रश्नः तिजमा कस्ता महिलाले ब्रत बस्नु हुँदैन? ब्रत बस्दा के फाइदा हुन्छ? [भिडियो] :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डा अरुणा उप्रेतीलाई प्रश्नः तिजमा कस्ता महिलाले ब्रत बस्नु हुँदैन? ब्रत बस्दा के फाइदा हुन्छ? [भिडियो]
रिता लम्साल बुधबार, भदौ २३, २०७८, ०८:०२:००
काठमाडौं– नेपाली हिन्दु महिलाहरुको विशेष चाड तिजको महोलमा सुरु भइरहेको छ। तिजमा हिन्दु महिलाहरुले दर खाने, ब्रत बस्ने, पुजाआजा गर्ने, नाचगान तथा रमाइलो गर्ने गर्छन्।
तिजको दर र ब्रत धार्मिक विस्वास र महत्वका लागि मात्र होइन महिला स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा अरुणा उप्रेती आजभोलि महिलाहरु सक्षम हुँदै गएकाले तिजको ब्रतको अघिल्लो दिन मात्र नभइ अन्य समयमा पनि साथी तथा समकक्षीसँग मिलेर दर खाने गरेको बताउँछिन्।
तिजको दरमा खाइने परिकार स्वास्थ्य र पोषणका लागि फाइदाजनक भएको उनको भनाइ छ।
तिजको ब्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक भएको उनले बताइन्।
‘दर भन्ने बित्तिकै दरिलो खानेकुरा खाइन्छ, ब्रत बस्ने अघिल्लो दिन खाएको दरले भोलिपल्ट ब्रत बस्दा आडिलो हुन्छ, टिक्न सकिन्छ भनेर हो,’ उनले भनिन्, ‘ब्रत बस्नु आफ्नो शरीरको लागि राम्रो कुरा हो। हाम्रो हिन्दु संस्कारमा ब्रत बस्ने चलन छ यो एकदमै राम्रो छ।’
आजभोलि सामान्य अवस्थामा शरीरलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी खानेकुरा खाइरहने भएकाले ब्रत बस्दा उपयुक्त हुने उनले बताइन्।
तिजमा मात्र नभइ सातामा एकपटक वा महिनामा २ पटक ब्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
ब्रत बस्दा मधुमेह, मोटोपना लगायतका समस्याबाट पनि मुक्ति मिल्ने उनले जानकारी दिइन्।
स्वस्थ व्यक्तिले तिजमा ब्रत बस्दा, पुजाआजा तथा नाचगान र रमाइलो गर्दा उनीहरु मानसिक तनावबाट मुक्त हुने र शान्ति मिल्ने उनको भनाइ छ।
ब्रत बस्ने बानीले मानिसमा अनुशासनको विकास समेत हुने डा उप्रेतीले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘ब्रत बस्नु भनेको खाना नखानु मात्र होइन, ब्रत बस्नु भनेको अनुशासनमा बस्नु पनि हो, मानसिक रुपमा सबल हुनुपनि हो, पुजाआजा गर्दा मानसिक रुपमा शान्ति मिल्छ।’
उनले धेरै शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने मानिसहरु गर्भवती, सुत्केरी तथा औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी तथा दीर्घरोग तथा समस्या भएका महिलाहरुले भने ब्रत नबस्दा नै उपयुक्त हुने उनले बताइन्।
उनले आफ्नो शारीरिक अवस्था ठिक भएमात्र ब्रत बस्न सबैलाई सुझाव दिएकी छन्।
‘यदी ब्रत बस्न सकिन्छ, शारीरिक अवस्था ठिक छ भने मात्र ब्रत बस्नुस्,’ उनले भनिन्, ‘गर्भवती हुनुहुन्छ, सुत्केरी हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ भने चाँही जबरजस्ती ब्रत नबस्नुस्’
तिजमा दर, ब्रत र नाचगान गर्दा महिला स्वास्थ्यमा हुने फाइदा, ब्रत बस्दा कस्ता कुरामा ध्यान दिने? कस्ता महिलाहरुले ब्रत बस्दा स्वास्थ्यमा असर नै पर्नसक्छ? लगायतका विषयमा हामीले जनस्वास्थ्य विज्ञ डा अरुणा उप्रेतीसँग भिडियो कुराकानी गरेका छौं।